ABS (Anti-lock brakes system)၏အလုပျလုပျပုံ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ABS အလုပျမလုပျလို့ ABS မီးလငျးနရေငျ ABS စနဈကနပွေီး အဓိကထိနျးခြုပျ... အလုပျလုပျပေးတဲ့... အရှိနျပွငျးပွငျးမောငျးလာစဉျမှာ ရုတျတရကျ ဘရိတျအမွနျနငျးလိုကျသျောလညျး ကားကို ဘေး ဘယျ/ညာ မတိမျးစောငျးသှားအောငျထိနျးသိမျးပေးခွငျး...
ရှောငျတိမျးကှနေို့ငျရနျ ABS စနဈမှကူညီပေးခွငျး...
ဘရိတျမာစတာပနျ့ဝါရှာ မကောငျးတော့၍ ဘရိတျသိပျမမိသောအခါမြားတှငျ... ABS မှ ဘရိတျကူဖမျးပေးခွငျး...
Vehicle Stability Control (VSC) စနဈအတှကျ မိုးရထေဲနှငျ့ရှံ့ဗှကျတောထဲတှငျ ကားလမျးခြျောသညျ့အခါ အလိုအလြောကျ ထိနျးခြုပျပေးခွငျး...
Traction Control System(TRC) စနဈဖွဈသော... ဗှကျထဲတှငျကားရုနျးသညျ့အခါ ဘီးတဈဘကျတညျးလညျနပေါက... လညျနသေောဘီးကို ဘရိတျလိုသလောကျဖမျးပေးကာ... ဘီးဘယျ/ညာ ကို ပွိုငျတူရုနျးစခွေငျး...
စသောအထကျပါစနဈမြားလညျး အလုပျမလုပျတော့ပါ... ABS မီးလငျးရသောအခကျြမြားမြာ အကွမျးအားဖွငျ့အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါသညျ။
ABS Control Box မြားတှငျ ဘရိတျမီးလိုငျး၏ အသုံးပွုသော မီးသီးမြား၏ ဝပျ(watt)အားကိုတိုငျးတာသောစနဈပါရှိသောကွောငျ့... ဘရိတျမီးသီးကြှမျးလြှငျသျော၎င်းငျး...ဘရိတျမီးကွိုးမှ မီးသှယျယူ၍ အပိုဘရိတျမီးမြား ဆငျသောအခါ ABS မီးလငျးတတျပါသညျ။ဘရိတျမီးသီးမြားကို လဲလှယျရာတှငျလညျး ဝပျအားတူသောမီးသီးသာထညျ့ရပါမညျ။ မီးသီးလဲပွီးသောအခါ မီးမပြောကျသေးပါက Scanner စကျဖွငျ့ Reset ပွနျလုပျရပါမညျ...
(၂)ABS Control မီးလိုငျးစနဈခြို့ယှငျးခကျြရှိ၍ လငျးခွငျးနှငျ့ ဘရိတျဖွူး(Fuse)နှငျ့ ABS ဖွူးပွတျ၍လငျးခွငျး...
ABS Control Box ခြို့ယှငျးခကျြရှိ၍သောအခါ...အဝငျအထှကျမီးလိုငျးမြားလှတျသောအခါတှငျ၎င်းငျး... ဘရိတျဖွူးနှငျ့ ABS ဖွူးပွတျသောအခါတှငျ၎င်းငျး ABS မီးလငျးလာပါသညျ... ထိုအခါ ဖွူးမြားကို စဈဆေးပွုပွငျခွငျး မီးလိုငျးစဈဆေးပွုပွငျခွငျး... ABS Control Box ကိုစဈဆေးကာ မကောငျးပါကလဲခွငျး တို့ပွုလုပျပွီးမှသာ ပွနျလညျ မီးဖြောကျ၍ရမညျဖွဈပါသညျ...
(၃)ABS Module ခြို့ယှငျးခကျြရှိ၍လငျးခွငျး...
ABS Module ခြို့ယှငျးခကျြရှိသောကွောငျ့လငျးရာတှငျ... ABS Pump Motor မကောငျးသောကွောငျ့လညျးလငျးတတျပါသညျ... ထိုသို့ဖွဈပါက ABS Pump Motor ကို ပွုပွငျ၍သျော၎င်းငျး... အသဈလဲ၍သျောလညျးပွငျပွီးမှသာ မီးဖြောကျ၍ရပါသညျ။ ABS Pump အတှငျးတှငျ မသနျ့ရှငျးသောကွောငျ့လညျးလငျးတတျပါသညျ။ ထိုသို့ဖွဈရခွငျးမှာ ဘရိတျဆီအဖုံးတှငျရေးထားသော... Brake fluid DOT(Department of Transportation) standard ဘရိတျဆီ DOT နံပါတျကိုမသုံး၍ဖွဈသညျ... DOT 3/4 နံပါတျတူကို သုံးရမညျသာမက မူရငျးပါလာသောဘရိတျဆီအရောငျကိုသာဖွညျ့၍ သုံးရပါမညျ။ DOT နံပါတျ မတူသောဘရိတျဆီဖွဈစေ...အရောငျမတူသောဘရိတျဆီဖွဈစေ... ထညျ့သုံးမိပါက ဘရိတျမာစတာပနျ့(Brake master pump) ... အတှငျးရှိဘရိတျဝါရှာ(Brake washer)မြားသညျ ပကျြစီးလှယျကာ... အနညျနှငျ့ အမှုနျမြားထှကျလာပွီး...ABS Pump အတှငျးရောကျသှားလြှငျ... Brake Pressure Modulator Valve မြား အပိတျအဖှငျ့မလုံသောကွောငျ့... ABS Module အသဈလဲမှသာကောငျးပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ဘရိတျဆီမြားကိုသုံးရာတှငျ အရညျအသှေးကောငျးသော ဘရိတျဆီ ဖွဈရမညျ့အပွငျ အဖုံးတှငျပါသော DOT နံပါတျနှငျ့ မူရငျးပါရှိသော ဘရိတျဆီ... အရောငျကိုသာသုံးရနျအရေးကွီးပါသညျ။
(၄)ရှယေ့ကျ(Front-wheel drive)မြားနှငျ့ 4WD ကားမြားတှငျ... ဒူးဆဈမြား(Constant-velocity joints) CV joint နှငျ့သဲကာမြားလဲရာမှလငျးခွငျး...
ဒူးဆဈမြားလဲရာတှငျ Signal Ring ပွနျမထညျ့မိခွငျး... အသဈတှငျ Signal Ring မြားမပါလာခွငျး... ဒူးဆဈသဲကာမြား လဲပွီးပွနျထညျ့ရာတှငျ Signal Ring Pinion မြားပဲ့သှားခွငျး... တို့ဖွဈပါက ABS wheel speed sensor သညျ အခကျြပေးမမှနျတော့သဖွငျ့... ABS မီးလငျးတတျပါသညျ...ထိုသို့ဖွဈပါက နဂိုအတိုငျးဖွဈအောငျပွနျလညျ ပွုပွငျမှသာ ABS မီးငွိမျးမညျဖွဈပါသညျ။
(၅)ရှယေ့ကျ ဆလှနျးကားမြားတှငျ ဟတျဘော(Wheel bearing) လဲရာတှငျ Signal Ring မပါသော ဟတျဘောထညျ့မိခွငျး...
ကြှနျတျောပွငျဖူးသော Honda Fit နှငျ့ ဆလှနျးကားတျောတျောမြားမြားတှငျ... ABS မီးလငျးရာတှငျ စကျနဲ့ စဈကွညျ့သောအခါ ဘယျဘီးက ABS ဆငျဆာ အလုပျမလုပျဟု ပွသျောလညျး...ABS ဆငျဆာ မီးလိုငျးအကုနျကောငျးနပွေီး... စကျနဲ့ ABS reset လုပျသျောလညျးမရပါ...အပွဈရှာရအလှနျခကျသော... အပွဈဖွဈပါသညျ...ထိုအပွဈမှာ ဆငျဆာ မီးလိုငျးအားလုံးကောငျးနပေါက... ဟကျဘောတှငျသာအဓိကဖွဈပါသညျ...ယခုနောကျပိုငျးလာသော ဖဈနှငျ့ အခွားသောဟှနျဒါနှငျ့ ဆလှနျးကားမြားတှငျ ABS signal ring ကို... ဟကျဘော သဲကာအဖုံးတဈဘကျတညျး(တဈဖကျသာပါပွီး အခွားတဈဖကျမှာ သံလိုကျမပါပါ)တှငျ အားအလှနျနညျးသောသံလိုကျ(magnet) ထညျ့ကာ... ဆငျဆာကို အလုပျလုပျစပေါသညျ...
ထိုအခါ သတိမထားမိသောအခြို့ဝပျရှော့မြားတှငျ...ဟကျဘောကို ဆိုဒျအားလုံး တူလြှငျ ထညျ့၍ ရသောကွောငျ့ သံလိုကျ signal ring မပါသောဟကျဘောမြား ထညျ့မိခွငျး...သံလိုကျပါသျောလညျး မကျြနှာပွငျမှား၍ ထညျ့မိခွငျးကွောငျ့... ABS sensor ဆငျဆာအလုပျမလုပျတော့သောကွောငျ့... ABS စနဈတဈခုလုံးအလုပျမလုပျတော့ပါ...ထိုအခါ အထကျဖျောပွပါ... ABS စနဈကထိနျးခြုပျပေးသော VSC စနဈနှငျ့ TRC စနဈတို့လညျး အလုပျမလုပျ နိုငျတော့ပါ...ထိုသို့ မဖွဈစရေနျ မျောဒယျမွငျ့ ဆလှနျးကားငယျမြား... ဗငျကားငယျမြား...ဝကျဈဂှနျကားငယျမြားကို ဟကျဘောလဲရာတှငျ...
(၁)သူ့ကားအမြိုးအစားအတှကျ ထုတျလုပျထားသော ဟကျဘောကိုသာသုံးပါ...
(၂)မိမိကားအမြိုးအစားအတှကျ ဟကျဘောမရလြှငျ ဆိုဒျအားလုံးတူသော ဟကျဘောကို သံလိုကျပါမပါ လှကြိုးပွားငယျလေးဖွငျ့ သဲကာကိုကပျစမျးကွညျ့ပါ
(၃)သံလိုကျပါသော ဟကျဘောကို မကျြနှာပွငျမှားမထညျ့မိစရေနျ ဂရုပွုပါ...
(၄)သံလိုကျပါသော သဲကာမကျြနှာပွငျသညျ ABS ဆငျဆာရှိရာ အတှငျးပိုငျးဘကျကိုသာထညျ့ရပါမညျ...
ပုံ (၅/၆) တှငျပါသော ABS signal ring အပွငျတှငျပါသောကားငယျမြား... ဟကျဘောသဲကာတှငျ သံလိုကျပါရနျမလိုပါ...
(၆)Toyota D4D,Vigo,Fortuner,Hiace ကားမြားနှငျ့ပဈကပျကားမြားတှငျ... နောကျဟတျဘောလဲရာတှငျ ABS signal ring ကိုနရောမှနျအောငျမထညျ့မိ၍လငျးခွငျး...
Toyota D4D,Vigo,Fortuner ပဈကပျကားမြားနှငျ့ အခွားပဈကပျကားမြားတှငျ... ဟတျဘောထိနျး(Retainer) နှငျ့ ဘောထိနျးကလဈ(Snap Ring) မြား အထကျတှငျ ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer အပိုတဈခုထညျ့ကာထိနျးထားပါသညျ။ နောကျဝငျရိုးတနျးရှိ Wheel speed sensor အပေါကျနှငျ့... ABS Signal Ring သညျကှကျတိဖွဈအောငျခြိနျထားပါသညျ။ ဒါကို သတိမပွုမိသောအခါ ဟတျဘောအသဈပွနျထညျ့ပွီးခြိနျတှငျ... ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer ကို အဆုံးထိ Press ဖွငျ့ဖိထညျ့လိုကျသောအခါ နောကျဘီး ABS အာရုံခံဆငျဆာသညျ... အခကျြပွမရတော့သဖွငျ့ ABS မီးလငျးတတျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ABS ပါသောပဈကပျကားမြားနောကျဟတျဘောလဲရာတှငျ... ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer အကှာအဝေးကို... နောကျရှပျ (Rear drive shaft) ထိပျမှ မညျမြှကှာဝေးသညျကို အရငျတိုငျးထားပွီးမှသာ ဟတျဘောဖွုတျလဲရပါမညျ။ Toyota D4D,Vigo,Fortuner, ပဈကပျကားမြားတှငျ ရှပျထိပျမှ... ဒုတိယဘောထိနျး(2nd Retainer)မကျြနှာထိပျအထိ... 59.7 cm ကှာဝေးပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ABS ပါသော ပဈကပျကားမြားအား နောကျဟတျဘောလဲလှယျရာတှငျ ဂရုစိုကျတိုငျးတာရပါသညျ။
(၇)ABS Wheel Speed Sensor ဘီးအာရုံခံဆငျဆာမြားမကောငျး၍လငျးခွငျး...
ဒူးဆဈနှငျ့ဆူးဆဈသဲကာမြားလဲရာတှငျနှငျ့အောကျပိုငျးပွုပွငျခြိနျတို့တှငျ... ABS အာရုံခံဆငျဆားမြားအားဖွုတျရာတှငျး၎င်းငျး... ဖွုတျပွီးပွနျထညျ့ခြိနျတှငျ၎င်းငျး အာရုံခံဆငျဆာသညျ နဂိုအတိုငျး နရောမကဘြဲ... အဆုံးအထိမဝငျဖွဈပါက ABS မီးလငျးတတျပါသညျ... ဂပြနျမှာသှငျးလာသောကားမြား၏ ABS Wheel Speed Sensor သညျ အာရုံခံဆငျဆာပေါကျ သံခြေးတကျကာအလှနျကွပျနတေတျပါသဖွငျ့ဖွုတျပါက... ကြိုးတတျပါသောကွောငျ့ ဘီးအာရုံခံဆငျဆာကို ဆကျသှယျထားသော... မီးပလပျဆော့ကတျမှသာ ဖွုတျလြှငျအကောငျးဆုံးဖွဈပါသညျ...
ABS မီးလငျးပါက Scanner ဖွငျ့စဈဆေးမှသာ... အနီးစပျဆုံးအဖွကေိုသိရမညျဖွဈပါသောကွောငျ့...Scanner စကျရှိသော... ကြှမျးကငျြသော ဝပျရှော့မြားတှငျသှားရောကျပွုပွငျသငျ့ပါသညျ။
ABS စနဈဟာ ကားတဈစီးမှ ယာဉျမောငျးသူအတှကျ အန်တာရာယျမှ... ကာကှယျပေးသော အရေးကွီးစနဈတဈခုဖွဈသဖွငျ့ အားလုံးသိရှိစရေနျ... မြှဝလေိုကျပါတယျခငျဗြား..
ABS (Anti-lock brakes system)၏အလုပ်​လုပ်​ပုံ
ABS အလုပ်မလုပ်လို့ ABS မီးလင်းနေရင် ABS စနစ်ကနေပြီး အဓိကထိန်းချုပ်... အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့... အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းလာစဉ်မှာ ရုတ်တရက် ဘရိတ်အမြန်နင်းလိုက်သော်လည်း ကားကို ဘေး ဘယ်/ညာ မတိမ်းစောင်းသွားအောင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း...
ရှောင်တိမ်းကွေ့နိုင်ရန် ABS စနစ်မှကူညီပေးခြင်း...
ဘရိတ်မာစတာပန့်ဝါရှာ မကောင်းတော့၍ ဘရိတ်သိပ်မမိသောအခါများတွင်... ABS မှ ဘရိတ်ကူဖမ်းပေးခြင်း...
Vehicle Stability Control (VSC) စနစ်အတွက် မိုးရေထဲနှင့်ရွံ့ဗွက်တောထဲတွင် ကားလမ်းချော်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း...
Traction Control System(TRC) စနစ်ဖြစ်သော... ဗွက်ထဲတွင်ကားရုန်းသည့်အခါ ဘီးတစ်ဘက်တည်းလည်နေပါက... လည်နေသောဘီးကို ဘရိတ်လိုသလောက်ဖမ်းပေးကာ... ဘီးဘယ်/ညာ ကို ပြိုင်တူရုန်းစေခြင်း...
စသောအထက်ပါစနစ်များလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ပါ... ABS မီးလင်းရသောအချက်များမျာ အကြမ်းအားဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ABS Control Box များတွင် ဘရိတ်မီးလိုင်း၏ အသုံးပြုသော မီးသီးများ၏ ဝပ်(watt)အားကိုတိုင်းတာသောစနစ်ပါရှိသောကြောင့်... ဘရိတ်မီးသီးကျွမ်းလျှင်သော်၎င်း...ဘရိတ်မီးကြိုးမှ မီးသွယ်ယူ၍ အပိုဘရိတ်မီးများ ဆင်သောအခါ ABS မီးလင်းတတ်ပါသည်။ဘရိတ်မီးသီးများကို လဲလှယ်ရာတွင်လည်း ဝပ်အားတူသောမီးသီးသာထည့်ရပါမည်။ မီးသီးလဲပြီးသောအခါ မီးမပျောက်သေးပါက Scanner စက်ဖြင့် Reset ပြန်လုပ်ရပါမည်...
(၂)ABS Control မီးလိုင်းစနစ်ချို့ယွင်းချက်ရှိ၍ လင်းခြင်းနှင့် ဘရိတ်ဖြူး(Fuse)နှင့် ABS ဖြူးပြတ်၍လင်းခြင်း...
ABS Control Box ချို့ယွင်းချက်ရှိ၍သောအခါ...အဝင်အထွက်မီးလိုင်းများလွတ်သောအခါတွင်၎င်း... ဘရိတ်ဖြူးနှင့် ABS ဖြူးပြတ်သောအခါတွင်၎င်း ABS မီးလင်းလာပါသည်... ထိုအခါ ဖြူးများကို စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း မီးလိုင်းစစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း... ABS Control Box ကိုစစ်ဆေးကာ မကောင်းပါကလဲခြင်း တို့ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြန်လည် မီးဖျောက်၍ရမည်ဖြစ်ပါသည်...
(၃)ABS Module ချို့ယွင်းချက်ရှိ၍လင်းခြင်း...
ABS Module ချို့ယွင်းချက်ရှိသောကြောင့်လင်းရာတွင်... ABS Pump Motor မကောင်းသောကြောင့်လည်းလင်းတတ်ပါသည်... ထိုသို့ဖြစ်ပါက ABS Pump Motor ကို ပြုပြင်၍သော်၎င်း... အသစ်လဲ၍သော်လည်းပြင်ပြီးမှသာ မီးဖျောက်၍ရပါသည်။ ABS Pump အတွင်းတွင် မသန့်ရှင်းသောကြောင့်လည်းလင်းတတ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘရိတ်ဆီအဖုံးတွင်ရေးထားသော... Brake fluid DOT(Department of Transportation) standard ဘရိတ်ဆီ DOT နံပါတ်ကိုမသုံး၍ဖြစ်သည်... DOT 3/4 နံပါတ်တူကို သုံးရမည်သာမက မူရင်းပါလာသောဘရိတ်ဆီအရောင်ကိုသာဖြည့်၍ သုံးရပါမည်။ DOT နံပါတ် မတူသောဘရိတ်ဆီဖြစ်စေ...အရောင်မတူသောဘရိတ်ဆီဖြစ်စေ... ထည့်သုံးမိပါက ဘရိတ်မာစတာပန့်(Brake master pump) ... အတွင်းရှိဘရိတ်ဝါရှာ(Brake washer)များသည် ပျက်စီးလွယ်ကာ... အနည်နှင့် အမှုန်များထွက်လာပြီး...ABS Pump အတွင်းရောက်သွားလျှင်... Brake Pressure Modulator Valve များ အပိတ်အဖွင့်မလုံသောကြောင့်... ABS Module အသစ်လဲမှသာကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဘရိတ်ဆီများကိုသုံးရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းသော ဘရိတ်ဆီ ဖြစ်ရမည့်အပြင် အဖုံးတွင်ပါသော DOT နံပါတ်နှင့် မူရင်းပါရှိသော ဘရိတ်ဆီ... အရောင်ကိုသာသုံးရန်အရေးကြီးပါသည်။
(၄)ရှေ့ယက်(Front-wheel drive)များနှင့် 4WD ကားများတွင်... ဒူးဆစ်များ(Constant-velocity joints) CV joint နှင့်သဲကာများလဲရာမှလင်းခြင်း...
ဒူးဆစ်များလဲရာတွင် Signal Ring ပြန်မထည့်မိခြင်း... အသစ်တွင် Signal Ring များမပါလာခြင်း... ဒူးဆစ်သဲကာများ လဲပြီးပြန်ထည့်ရာတွင် Signal Ring Pinion များပဲ့သွားခြင်း... တို့ဖြစ်ပါက ABS wheel speed sensor သည် အချက်ပေးမမှန်တော့သဖြင့်... ABS မီးလင်းတတ်ပါသည်...ထိုသို့ဖြစ်ပါက နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လည် ပြုပြင်မှသာ ABS မီးငြိမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅)ရှေ့ယက် ဆလွန်းကားများတွင် ဟတ်ဘော(Wheel bearing) လဲရာတွင် Signal Ring မပါသော ဟတ်ဘောထည့်မိခြင်း...
ကျွန်တော်ပြင်ဖူးသော Honda Fit နှင့် ဆလွန်းကားတော်တော်များများတွင်... ABS မီးလင်းရာတွင် စက်နဲ့ စစ်ကြည့်သောအခါ ဘယ်ဘီးက ABS ဆင်ဆာ အလုပ်မလုပ်ဟု ပြသော်လည်း...ABS ဆင်ဆာ မီးလိုင်းအကုန်ကောင်းနေပြီး... စက်နဲ့ ABS reset လုပ်သော်လည်းမရပါ...အပြစ်ရှာရအလွန်ခက်သော... အပြစ်ဖြစ်ပါသည်...ထိုအပြစ်မှာ ဆင်ဆာ မီးလိုင်းအားလုံးကောင်းနေပါက... ဟက်ဘောတွင်သာအဓိကဖြစ်ပါသည်...ယခုနောက်ပိုင်းလာသော ဖစ်နှင့် အခြားသောဟွန်ဒါနှင့် ဆလွန်းကားများတွင် ABS signal ring ကို... ဟက်ဘော သဲကာအဖုံးတစ်ဘက်တည်း(တစ်ဖက်သာပါပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာ သံလိုက်မပါပါ)တွင် အားအလွန်နည်းသောသံလိုက်(magnet) ထည့်ကာ... ဆင်ဆာကို အလုပ်လုပ်စေပါသည်...
ထိုအခါ သတိမထားမိသောအချို့ဝပ်ရှော့များတွင်...ဟက်ဘောကို ဆိုဒ်အားလုံး တူလျှင် ထည့်၍ ရသောကြောင့် သံလိုက် signal ring မပါသောဟက်ဘောများ ထည့်မိခြင်း...သံလိုက်ပါသော်လည်း မျက်နှာပြင်မှား၍ ထည့်မိခြင်းကြောင့်... ABS sensor ဆင်ဆာအလုပ်မလုပ်တော့သောကြောင့်... ABS စနစ်တစ်ခုလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ပါ...ထိုအခါ အထက်ဖော်ပြပါ... ABS စနစ်ကထိန်းချုပ်ပေးသော VSC စနစ်နှင့် TRC စနစ်တို့လည်း အလုပ်မလုပ် နိုင်တော့ပါ...ထိုသို့ မဖြစ်စေရန် မော်ဒယ်မြင့် ဆလွန်းကားငယ်များ... ဗင်ကားငယ်များ...ဝက်စ်ဂွန်ကားငယ်များကို ဟက်ဘောလဲရာတွင်...
(၁)သူ့ကားအမျိုးအစားအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော ဟက်ဘောကိုသာသုံးပါ...
(၂)မိမိကားအမျိုးအစားအတွက် ဟက်ဘောမရလျှင် ဆိုဒ်အားလုံးတူသော ဟက်ဘောကို သံလိုက်ပါမပါ လွှကျိုးပြားငယ်လေးဖြင့် သဲကာကိုကပ်စမ်းကြည့်ပါ
(၃)သံလိုက်ပါသော ဟက်ဘောကို မျက်နှာပြင်မှားမထည့်မိစေရန် ဂရုပြုပါ...
(၄)သံလိုက်ပါသော သဲကာမျက်နှာပြင်သည် ABS ဆင်ဆာရှိရာ အတွင်းပိုင်းဘက်ကိုသာထည့်ရပါမည်...
ပုံ (၅/၆) တွင်ပါသော ABS signal ring အပြင်တွင်ပါသောကားငယ်များ... ဟက်ဘောသဲကာတွင် သံလိုက်ပါရန်မလိုပါ...
(၆)Toyota D4D,Vigo,Fortuner,Hiace ကားများနှင့်ပစ်ကပ်ကားများတွင်... နောက်ဟတ်ဘောလဲရာတွင် ABS signal ring ကိုနေရာမှန်အောင်မထည့်မိ၍လင်းခြင်း...
Toyota D4D,Vigo,Fortuner ပစ်ကပ်ကားများနှင့် အခြားပစ်ကပ်ကားများတွင်... ဟတ်ဘောထိန်း(Retainer) နှင့် ဘောထိန်းကလစ်(Snap Ring) များ အထက်တွင် ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer အပိုတစ်ခုထည့်ကာထိန်းထားပါသည်။ နောက်ဝင်ရိုးတန်းရှိ Wheel speed sensor အပေါက်နှင့်... ABS Signal Ring သည်ကွက်တိဖြစ်အောင်ချိန်ထားပါသည်။ ဒါကို သတိမပြုမိသောအခါ ဟတ်ဘောအသစ်ပြန်ထည့်ပြီးချိန်တွင်... ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer ကို အဆုံးထိ Press ဖြင့်ဖိထည့်လိုက်သောအခါ နောက်ဘီး ABS အာရုံခံဆင်ဆာသည်... အချက်ပြမရတော့သဖြင့် ABS မီးလင်းတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ABS ပါသောပစ်ကပ်ကားများနောက်ဟတ်ဘောလဲရာတွင်... ABS Signal Ring ကို 2nd Retainer အကွာအဝေးကို... နောက်ရှပ် (Rear drive shaft) ထိပ်မှ မည်မျှကွာဝေးသည်ကို အရင်တိုင်းထားပြီးမှသာ ဟတ်ဘောဖြုတ်လဲရပါမည်။ Toyota D4D,Vigo,Fortuner, ပစ်ကပ်ကားများတွင် ရှပ်ထိပ်မှ... ဒုတိယဘောထိန်း(2nd Retainer)မျက်နှာထိပ်အထိ... 59.7 cm ကွာဝေးပါသည်။ထို့ကြောင့်ABS ပါသော ပစ်ကပ်ကားများအား နောက်ဟတ်ဘောလဲလှယ်ရာတွင် ဂရုစိုက်တိုင်းတာရပါသည်။
(၇)ABS Wheel Speed Sensor ဘီးအာရုံခံဆင်ဆာများမကောင်း၍လင်းခြင်း...
ဒူးဆစ်နှင့်ဆူးဆစ်သဲကာများလဲရာတွင်နှင့်အောက်ပိုင်းပြုပြင်ချိန်တို့တွင်... ABS အာရုံခံဆင်ဆားများအားဖြုတ်ရာတွင်း၎င်း... ဖြုတ်ပြီးပြန်ထည့်ချိန်တွင်၎င်း အာရုံခံဆင်ဆာသည် နဂိုအတိုင်း နေရာမကျဘဲ... အဆုံးအထိမဝင်ဖြစ်ပါက ABS မီးလင်းတတ်ပါသည်... ဂျပန်မှာသွင်းလာသောကားများ၏ ABS Wheel Speed Sensor သည် အာရုံခံဆင်ဆာပေါက် သံချေးတက်ကာအလွန်ကြပ်နေတတ်ပါသဖြင့်ဖြုတ်ပါက... ကျိုးတတ်ပါသောကြောင့် ဘီးအာရုံခံဆင်ဆာကို ဆက်သွယ်ထားသော... မီးပလပ်ဆော့ကတ်မှသာ ဖြုတ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်...
ABS မီးလင်းပါက Scanner ဖြင့်စစ်ဆေးမှသာ... အနီးစပ်ဆုံးအဖြေကိုသိရမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်...Scanner စက်ရှိသော... ကျွမ်းကျင်သော ဝပ်ရှော့များတွင်သွားရောက်ပြုပြင်သင့်ပါသည်။
ABS စနစ်ဟာ ကားတစ်စီးမှ ယာဉ်မောင်းသူအတွက် အန္တာရာယ်မှ... ကာကွယ်ပေးသော အရေးကြီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် အားလုံးသိရှိစေရန်... မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား..
POLISHING နှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း ၁၆၃ ခုကိုရှာဖွေရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။